Ny Galaxy Note 7 dia nanana olana lehibe roa samy hafa tao amin'ny bateria Vaovao momba ny gadget
Ny fikarohana Galaxy Note 7 dia mahita olana roa amin'ny bateria
Rehefa nipoitra ny olana rehetra tamin'ny Galaxy Note 7, dia sarotra tamin'ny Samsung ny nampihena ny simba nianjady tamin'ny afo sy ny fipoahana tao amin'ny terminal misy azy. Na dia tokony hijerena azy amin'ny fomba fijery sy hahafantatra fa ny olan'ny Samsung aza ianao zavatra mety hitranga amin'ny orinasa hafa ary izany dia mametraka antsika amin'ny làlana hahafantatra ny iray amin'ireo fetra fanaovana smartphone finday manify miaraka amin'ny bateria goavambe.
Samsung nambara ihany tamin'ny farany nianjera ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny orinasa momba ny Note 7 ary namoaka fehin-kevitra mahaliana izy. Ny olana dia ny batterie ary olana roa samy hafa no nahatonga ny tranga. Ny bateria Note 7 tany am-boalohany dia nanana trano kely loatra handraisana ny fivorian'ny electrode, izay nahatonga ny tsy fahombiazan'ny hafanana sy ny lalan-kely miaraka amin'ny fampiasana mahazatra.
Ho bonus, ny electrodes ratsy an'ny sela dia amboarina amin'ny toerana tsy mety bateria. Saingy ny zavatra tena liana sy matotra indrindra dia ny manaraka, satria ireo olana tamin'ny maodely tany am-boalohany dia lany rehefa nosoloin'ireo izay heverina ho tsara ireo singa malemy ireo.
Nifindra tamina mpamokatra hafa ilay orinasa ho an'ireo batery ary manana ireo sela vaovao olana amin'ny welding elektroda tsara. Izany dia nahatonga ny fehezam-peo famehezana ho vaky, ka ny sela sasany tsy voaaro 100%.
Nasehon'i Samsung ny fomba nampidirana ny baterian'ny mpanamboatra roa ao amin'ny Note 7 efa nosedraina mamerina ny fianjeran'ireo mpampiasa. Ny fitsapana natao tao amin'ny laboratoara dia nahitana fihoaram-pefy teo amin'ny seranan-tsambo USB, tsy nisy ny toeran'ny fitaovana na koa nandrefesana ny vokadratsin'ny scanner iris. Namorona algorithm mihitsy aza izy tao amin'ny rindrambaiko hamerina ny fampiasana finday mahazatra ao amin'ny laboratoara.
Mba tsy hiverenan'ity olana ity dia namorona i Samsung vondrona iray izay hahalala ny batterie miaraka amin'ny fanampian'ny manam-pahaizana momba ny indostria ary dingana fitsapana valo isa hanamarinana ny fiarovana ny bateria. Hanendry ekipa isaky ny singa fototra amin'ny vokatra vaovao ianao mba hitsapana sy hanamarinana ny fiarovana azy ireo.
Toa matoky tena manokana ilay orinasa Koreana fa ny olana tsy haverina amin'ny Galaxy S8 efa akaiky. Ka manantena isika fa izany no zava-misy ary tsy tokony hiampita ny rantsan-tànany ireo talen'ity orinasa ity amin'ny andro hahatongavany eny an-tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny fikarohana Galaxy Note 7 dia mahita olana roa amin'ny bateria
Samsung dia manamafy fa tsy hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny Galaxy S8 ao amin'ny MWC
Ny laharana Lumia dia azo jerena ao amin'ny American Windows Store